February 2019 – MM File
သင့်မျက်နှာပြင် အလှစစ်တမ်းအရ သင်ဘယ်လောက်လန်းပြီး ဘယ်လောက်ဂွမ်းသလဲ ?
သင့်မျက်နှာပြင် အလှစစ်တမ်းအရ သင်ဘယ်လောက်လန်းပြီး ဘယ်လောက်ဂွမ်းသလဲ ? ကိုယ်က မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် ထူးဆန်းနေတာတွေ့ရပါမယ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
သင့်အကြောင်း အမှန်တရား ခြောက်ခုက ဘာဖြစ်မလဲ ?
သင့်အကြောင်း အမှန်တရား ခြောက်ခုက ဘာဖြစ်မလဲ ? သင်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိတဲ့ သင့်အကြောင်းတွေပေါ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
သင့် အတွက် ဘယ်လိုချစ်သူများနေ့ ဖြစ်မှာလဲ
သင့် အတွက် ဘယ်လိုချစ်သူများနေ့ ဖြစ်မှာလဲ ဘယ်လိုတွေ ရင်ခုန်စရာ ကြုံဆုံရမလဲ ဆိုတာက… ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
သင့်ရဲ. အသည်းတစ်ခြမ်းက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ?
သင့်ရဲ. အသည်းတစ်ခြမ်းက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ? ဘယ်သူဘယ်ဝါလည်းဆိုတာ အတွေးပွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သင့်ရဲ. အသည်းတစ်ခြမ်းက […]
သင့်ပုံကိုမြင်ပြီး သင့်ညီလေးဆိုဒ် ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ လူတွေ ခန့်မှန်းကြသလဲ ?
သင့်ပုံကိုမြင်ပြီး သင့်ညီလေးဆိုဒ် ဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ လူတွေ ခန့်မှန်းကြသလဲ ? သူတို့ ခန့်မှန်းချက်က မှန်ရော မှန်မှာလား ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင့် ကိုယ်ပိုင် အကျင့်သုံးခုက ဘာတွေလဲ ?
သင့် ကိုယ်ပိုင် အကျင့်သုံးခုက ဘာတွေလဲ ? ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ ဖြစ်လာတာမဟုတ်တဲ့ သင့်ရဲ. ကိုယ်ပိုင်အကျင့်တွေ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
သင့်ရုပ်ရည်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ မြန်မာစကားပုံကဘာလဲ ?
သင့်ရုပ်ရည်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ မြန်မာစကားပုံကဘာလဲ ? သင့်ရုပ်ရည်ကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ မြန်မာစကားပုံတစ်ခုဆိုရင် ဘာဖြစ်မလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode […]
သင်က ဘယ်လိုချစ်သူမျိုးလဲ ? သင်က သင့်ချစ်သူအတွက် ဘယ်လိုချစ်သူမျိုးလဲဆိုတာ…. ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် Unicode သငျက ဘယျလိုခဈြသူမြိုးလဲ […]
သင့်ဆီမှာ လူတွေ မနာလိုဖြစ်စေတဲ့ အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ ?
သင့်ဆီမှာ လူတွေ မနာလိုဖြစ်စေတဲ့ အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ ? လူတွေ မနာလိုတာ ရပ်တန့်သွားအောင် သင်ဘာလုပ်ရမလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]
သင့်ရဲ. ရည်းစားအဌားလိုက်သည် ကြေငြာက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ?
သင့်ရဲ. ရည်းစားအဌားလိုက်သည် ကြေငြာက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ? ကြေငြာလေးကြောင့် လူတွေက သင့်ကို ဘယ်လိုသိမလဲ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး ကစားကြည့်လိုက်နော် ဘယ်လိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြေတွေ ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော် အဖြေလေးကို ကျေနပ်အားရတယ်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မျှဝေဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော် […]